जानकारी मुलक Archives - Mero Khabar Nepal
काठमाडौं । आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । मध्यरातमा शुरु हुने ग्रहण ३ घन्टा भन्दा बढीको हुनेछ भने बुधवार विहान मात्रै अन्त्य हुनेछ । सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सिधा रेखामा परेको समयमा पृथ्वीको छाँया चन्द्रमामा पर्ने भएकाले खण्डग्रास ग्रहण लागेको बुझ्ने गरिन्छ । नेपाली समय अनुसार राती १ बजेर ४७ मिनेटमा प्रारम्भ हुने ग्रहण बुधवार विहान ४ बजेर ४५ मिनेटमा अन्त्य हुने बताइएको छ । खगोलविद्हरुका अनुसार यो अवधिमा चन्द्रमाको आधाभन्दा भन्दा बढी भाग छोपिएको अवस्थामा देखिनेछ । यो ग्रहण नेपालसहित भारत, चीन, मंगोलिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, जापान, यूरोप, रसिया, अष्ट्रेलिया आसपासका मुलुकबाट प्रष्टै देखिने छ । क्यानडा र उत्तर अमेरिकामा बसोवास गर्नेहरुले भने यो ग्रहणको अनुभव लिन पाउने छैनन् । चन्द्रग्रहणमा आँखालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने खालका किरण नहुने भएकाले जो कोहिले नाङ्गो आँखाले सजिलै
काठमाडौं । फिल्म निर्माता छविराज ओझा र उनकी कान्छी पत्नी शिल्पा पोखरेलबीचको घर झगडा साम्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।युट्युब अन्तर्वार्ताहरूमा नायिका समेत रहेकी पोखरेलले रुदै ओझामाथि नानाथरी आक्षेपहरू लगाउन थालेकी छिन् । पोखरेलले युट्युब अन्तर्वार्तामार्फत संगिन आरोपहरू लगाएपछि ओझाले ती सबै आरोपहरू खारेज गरिदिएका छन् । घरझगडालाई पोखरेलले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल बनाएपछि ओझाको मन कुडिएको छ । ओझाले कान्छी पत्नी पोखरेललाई न्याय दिने समेत बताएका छन् । नायिका पोख्रेलले श्रीमानबाट आफूलाई घरेलु हिंसा भएको र जीउज्यानको सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।दुवै पक्षलाई बोलाएर प्रहरीले कुरा मिलाएर पठाएको थियो । ओझाले आफ्नो गल्तीका लागि माफी मागिसकेका छन् ।नायिका पोखरेलले विवाहको तीन वर्षको अवधिमा धेरै पटक आफूलाई श्रीमान ओझाले हातपात गरेको दाबी आफ्ना अन्तर्वार्ताहर
आज मंगलबार चन्द्रग्रहण लाग्दै, यस्तो छ योग, कुन ग्रहलाई कस्तो फलदोष
HOME2019JULYआज मंगलबार चन्द्रग्रहण लाग्दै, यस्तो छ योग, कुन ग्रहलाई कस्तो फलदोष Uncategorized आज मंगलबार चन्द्रग्रहण लाग्दै, यस्तो छ योग, कुन ग्रहलाई कस्तो फलदोष 31 mins ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता Sharing is caring! ShareTweetLinkedIn 0SHARES काठमाडौं / मंगलबार आषाढशुक्ल पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । चन्द्रग्रहण निकै लामो लाग्ने जनाइएको छ । यसको समय २ घण्टा ५९ मिनेटको हुँनेछ । मंगलबार राति १ः४६ बजेदेखि स्पर्श गर्ने चन्द्रग्रहण बुधबार बिहान ४ः४५ बजे मात्र मोक्ष हुनेछ । बिहान ३ः१५ बजेको समयमा मध्य हुनेछ । ग्रहण राति लागे पनि मंगलबार अपरान्ह ४ः४६ बजेदेखि सुतक लाग्नेछ । सुतकका समयमा बाल, वृद्ध, आतुर बाहेक अरुलाई भोजनमा निषेध गरिएको छ । ग्रहणका समयमा भने ध्यानजप बाहेक अरु केही गर्न नहुने उल्लेख छ । कुन राशीलाई कस्तो फलदोषः मेष– माननाश वृष– कष्टम्
भोलि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, चार राशीलाई मात्रै शुभ हुने
काठमाडौं । भोलि मंगलबार खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । मध्यरातमा शुरु हुने ग्रहण ३ घन्टा भन्दा बढीको हुनेछ भने बुधवार विहान मात्रै अन्त्य हुनेछ । सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सिधा रेखामा परेको समयमा पृथ्वीको छाँया चन्द्रमामा पर्ने भएकाले खण्डग्रास ग्रहण लागेको बुझ्ने गरिन्छ । नेपाली समय अनुसार राती १ बजेर ४७ मिनेटमा प्रारम्भ हुने ग्रहण बुधवार विहान ४ बजेर ४५ मिनेटमा अन्त्य हुने बताइएको छ । खगोलविद्हरुका अनुसार यो अवधिमा चन्द्रमाको आधाभन्दा भन्दा बढी भाग छोपिएको अवस्थामा देखिनेछ । सुत्र टि.भीका भिडियोहरु पनि हेर्नुस यो ग्रहण नेपालसहित भारत, चीन, मंगोलिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, जापान, यूरोप, रसिया, अष्ट्रेलिया आसपासका मुलुकबाट प्रष्टै देखिने छ । बरिष्ठ खगोलविद् जयन्त आचार्यका अनुशार क्यानडा र उत्तर अमेरिकामा बसोवास गर्नेहरुले भने यो ग्रहणको अनुभव लिन पाउने छैनन् । चन्द्रग्रहणम
साउन २ गते र १० गते नेपाल बन्द
HOME2019JULYसाउन २ गते र १० गते नेपाल बन्द News साउन २ गते र १० गते नेपाल बन्द 1 hour ago नेपाल इन्साइडर संवाददाता Sharing is caring! ShareTweetLinkedIn 0SHARES लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको विरुद्ध उत्रिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले दुई दिन नेपाल बन्द गर्ने भएको छ । महासंघले साउन २ गते र १० गते नेपाल बन्द गर्ने भएको छ भने अन्य विविध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापन खारेज गर्न माग सहित आरक्षण बचाऔँ भन्दै आन्दोलन थालेको महासंघले मसाल जुलुस, विशाल जनप्रदर्शन र नेपाल बन्दलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान विपरित, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र आरक्षणको मर्मविपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । महासंघले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा २०७६ असार २८ ग
तपाइको भिषा सक्कली हो वा नक्कली ? थाहा पाउने तरिका हेर्नुहोस्
जेठ १३, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदा थाहा पाउनुपर्ने जानकारी मध्ये एक हो भिषा, तपाइको भिषा सक्कली हो वा नक्कली ? कतिपए म्यानपावर तथा एजेन्टले भिषा आएको भन्दै कामदारबाट रकम लिने गरेका गुनासा आउने गर्दछन् यस्तो अवस्थामा आफ्नो भिषा सक्कली हो या नक्कली हो आँफैले घरैबाट इन्टरनेटको सहायतामा हेर्न सकिन्छ। तपाईलाई जारी गरिएको भिषा सक्कली हो कि होइन छुट्याउनको लागि तल उपलब्ध देश अनुसार क्लिक गरि चेक गर्नुहोस्। साउदी अरेविया ओमान बहराइन कुवेत कतार यूएई
कतै तपाईसँग यस्तो मोबाइल त छैन ? अब ६ महिनापछि नेपालमा चल्दैन
काठमाडौं। भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रुपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् । मोबाइल पहिचानाका लागि प्रयोग हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालका अनुसार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट एमडीएमएस९० सिस्टम नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ ‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ६ महिना भित्र यो लागू गराउँछौं ।’ प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयतकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल
हराएको मोबाइल कसले लग्यो भनेर १ मिनेटमै भेटाउने यस्तो उपय – (सबैले जानि राख्दा राम्रो)
काठमाडौं: के तपाइ मोबाइल हराएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने अब यसरी १ मिनेटमै पत्ता लगाउनुहोस् तपाँइको मोबाइल कसले लग्यो भनेर। यो जानकारी सबैको लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ किनकी अहिले हाम्रो दैनिक जीवनमा मोबाइल हामीलाई नभइ नहुने चीज जस्तै बनेको छ। मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि थोरैबेर मात्रै आँखाबाट टाढा भयो भने पनि ठूलै समस्या झेल्नुपर्छ । मोबाइल कतिपय समयमा राखेको ठाउँ भूल्न सकिन्छ भने कतिपय समयमा हराउन पनि सक्छ । यदि तपाईंको मोबाइल फोन हरायो भने त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने तुरुन्तै आफैँ पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र तपाईंले त्यसलाई लक गरिदिन र त्यहाँ भएका डाटाहरु मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ । तरिका निकै सजिलो छ ।यस्तो सुविधा तपाईंलाई गुगलले दिएको छ । १। सबैभन्दा अघि गुगलको होम पेज खोल्नुहोस् । त्यहाँ जिमेल आईडी लगइन गर्नुहोस्, जुन तपाईंको एण्ड्रोइड
२८ असार, तनहुँ – तनहुँको भानु नगरपालिकाले भानुजयन्तीका अवसरमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली भाषाका धरोहर भानुभक्त आचार्यको सम्मानस्वरुप नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । नगरकार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिकास्थित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भानु नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुनिल पाण्डेले जानकारी दिए । भानुभक्तको सम्मानस्वरुप नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक बिदा दिइएको नगरप्रमुख उदयराज गौलीले बताए । उनले भने, “भारतमा भानुभक्त आचार्यको ठूलो सम्मान छ तर हाम्रै ठाउँमा हामीले भानुको सम्मान गर्न सकेका छैनौँ ।” प्रत्येक वर्षको भानुजयन्तीमा बिदा दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । विसं १८७१ असार २९ गते भानु नगरपालिका–४ शिखरकटेरीमा जन्मिएका भानुभक्त आचार्यको विसं १९२५ असोज ६ गते नि
काठमाडौं / निरन्तरको वर्षाका कारण पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आएको बाढीले सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ । शनिबार राति ९ बजेको मापन अनुसार पानीको वहाव ३ लाख ७१ हजार ११० सय क्यूसेक पुगेको छ । सप्तकोसी पुल उच्च जोखिममा परेका कारण राती १० बजे कन्ट्रोल रुमले ५६ वटै ढोका खुल्ला गरेको सशस्त्र प्रहरी बल भण्टावारीका इन्स्पेक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले जानाकारी दिएका छन् । वर्षा निरन्तर जारी रहेकाले सप्तकोशीमा पानीको बहाव थप बढ्न सक्ने भन्दै प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क अवस्थामा रहन अपिल गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ ।